पुरुषहरु त मेरा खेलौना हुन् – मोडेल स्मिता थापा | Nepalese.org - No. 1 News Portal from Nepal, Political News, Science, Social, Sport, Ecomony, Business, Entertainment, Movie, Nepali Model, Actor, Actoress, Audio, Video, Interview
पुरुषहरु त मेरा खेलौना हुन् – मोडेल स्मिता थापा
यिनी हुन् मोडेल स्मिता थापा । मोडेल थापा यौनमा पुरुषको होइन महिलाको अधिकार हुनुपर्छ भन्ने मान्यता राख्छिन् । नेपाली समाजमा पुरुषहरु महिलालाई यौनेच्छा शान्त पार्ने साधनका रुपमा प्रयोग गर्छन् भन्ने पुरानो मान्यताका विरुद्ध उनी खरो रुपमा उत्रन चाहन्छिन् । उनी जस्ता धेरै महिलाका कारण नेपाली समाजमा पुरुष यौनकर्मीको संख्या बढ्दै गएको छ । त्यस्ता पुरुष प्रयोग गर्ने युवती मध्ये एक हुन् मोडल स्मिता थापा । स्मिता त्यस्ता युवतीहरुकी प्रतिनिधि हुन् जो पुरुषलाई यौन साधन मात्रै मान्छन् । उनको विचारमा पुरुषले महिला माथि मायाको नाममा यौन शोषण गरेको छ । अब पालो युवतीको हो । युवतीहरुले पनि पुरुषहरुलाई यौन साथीका रुपमा मात्र हेर्न सिक्नुपर्छ ।
भनिन्छ, केही पुरुषहरु महिलालाई खेलौनाका रुपमा हेर्छन्, उनीहरु खेल्छन् र उपायोगिता सकिएपछि फ्याक्छन् । के यस्तै कुरा महिलाहरु पनि सोच्छन् ?सोच्छन्, किन सोच्दैनन् ? म त्यस्तै युवती हुँ । पुरुषहरु मेरा खेलौना हुन् । मेरो शरीरले इच्छा गर्दा उनीहरुलाई युज गर्छु । सकिएपछि त्यसको उपादेयता पनि सकिन्छ ।कति पुरुषसँग संगत गर्नुभयो ?मैले १६ वर्षदेखि पुरुषको संगत गर्दै आएकी छु । अहिलेसम्म कति पुगे होलान् भनेर गन्दा अल्मलिन्छु । धेरै पुगिसके, कति भन्नु ? (लामो हाँसो)भनेपछि ती सबै खेलौना नै थिए ?पहिले त ती ड्रिम ब्वाई नै थिए । पछि–पछि मलाई पुरुष भनेका खेलौना हुन् भन्ने लाग्न थाल्यो ।
पुरुषहरु स्वार्थी कि महिला ?म महिला भएकीले महिलालाई किन स्वार्थी भनौं ? बरु पुरुष नै स्वार्थी हुन्छन् । महिलाहरु मायामा पग्लन्छन्, तर पुरुषहरु पग्लिएको मैले पाईंन । म कुनै पुरुषको मायामापर्दा उसले मलाई विवाह गरेन । मायामा पग्लिने भए त विवाह गरिहाल्थ्यो नि ।
विवाहगर्ने अनुकुल अवस्था नहुन पनि सक्छ नि, विवाह नगर्ने वित्तिकै पुरुषलाई स्वार्थी भन्न मिल्छ पुरुषहरु विवाह अघि म जस्तै हट एण्ड सेक्सी गर्लफ्रेन्ड चाहाँदा रहेछन् । गाडीमा राख्यो, घुमायो, अनि मोजमस्ती गरो । जव विवाहको कुरा आउँछ, उनहिरुलाई घर सम्हाल्ने, सिधा–सादा केटी चाहिन्छ रे ? विवाह अघि पनि गर्ने त्यही हो, पछि पनि त्यही हो । त्यसो भए व्यवहार चाहिं किन फरक ?
किनभने तपाईंहरु जस्ता युवतीहरुलाई उनीहरुले खर्च गरेका हुन्छन्, स्वार्थकै लागि संगत गरेका हुन्छन् होइन र ?म कर्ल गर्ल होइन । कतिपय अवस्थामा मेरै पैसावाट उनीहरुले मोज गरेका छन् । त्यस्ता युवती पनि होलान्, जसलाई खान–लाउन पुग्दैन, उनीहरुलाई त्यसरी पैसा लिनु बाध्यता पनि होला । तर, म त सम्पन्न घरकी युवती हुँ । मजस्ता खुला विचारका युवतीलाई देख्ने बित्तिकै समाजले गलत अर्थ लगाउने गर्छ । हाम्रो समाजको धारणा नै गलत छ ।
तपाईं गाडी चढ्नुहुन्छ, फ्ल्याटमा बस्नुहुन्छ, विचार र व्यवहार पनि त्यस्तै देखेपछि यस्तो सोच्नु स्वभाविक नै हो, होइन र ?म व्यक्तिगत जीवनमा फेमिली ब्याकग्राउन्डको कुरा गर्न चाहान्न । तर यति भन्छु, म महिनाको ४–५ लाख खर्च गर्ने क्षमता राख्छु । म बीटेक गरेकी शिक्षित एवम् सक्षम युवती हुँ ।
राम्रो मोडल बन्ने । खुसीसाथ जीवन बिताउने । दुई–चार वटा एड (विज्ञापन) गर्दा बजारबाट जुन रेस्पोन्स पाएँ, त्यसले मलाई मोडलिङमा रुचि बढाएको छ । बाँकी जीवन आफूले चाहेको जस्तो गरी बिताउने । विशेषगरी नयाँ–नयाँ पुरुषसँग सङ्गत गर्ने ।
सवैभन्दा पहिला पुरुषको संगत गर्नुभयो कि मोडल बन्ने चाहाना राख्नु भयो ? म स्कूलमा फरवार्ड थिएँ । राम्रो नाच्ने र एक्टिङ गर्थे । १६ वर्षको उमेरदेखि नै पुरुषको संङ्गत पनि गर्न थालें ।पहिलो पटक सङ्गत गरेको पुरुषको संझना छ ? छ । मैले डान्स क्लासमा भेटेकी हुँ । ऊ २७ वर्ष जतिको थियो । ऊसँग मेरो “ओरल सेक्स” भएको थियो ।
त्यति सानो उमेरमा कसरी ओरल सेक्सको कुरा थाहा पाउनु भयो ?त्यो आफैंमा थाहा पाउने कुरा हो । सेक्स त प्राक्रितिक कुरा हो नि, होइन र ? फेरि त्यो निकै अनुभवी मानिस थियो, उसले नै मलाई सेक्सको महत्व सिकाएको हो ।त्यो एक प्रकारको शोषण थियो भन्ने लाग्दैन ? अहिले आएर लाग्छ किनभने उसले मेरो चाहाना पुरा गर्दैनथ्यो । तर मैले ओरल गर्दा ऊ जति खुसी देखिन्थ्यो, त्यो देखेर मलाई आनन्द लाग्थ्यो ।
दोस्रो पुरुष पनि संझनु हुन्छ ?सम्झन्छु । त्यसवेला म १७ वर्षकी थिएँ । ऊसँग मेरो प्राकृतिक सम्पर्क भएको थियो । म पहिलो पटक साँच्चैकी युवती भएकी थिएँ । ऊ भने ३१ वर्षको थियो ।तपाईंलाई सधैं पाको पुरुष नै मन पर्नुको कारण ?किनभने उनहिरु अनुभवी हुन्छन् । अर्को कुरा पाको मानिससँग उठबस गर्दा अरुले अनावश्यक शंका पनि गर्दैनन् । मेले अहिलेसम्म आफू सेफ साइडमा बसेर जीवन बिताएकी छु ।
गलत गरें कि भनेर पश्चात्ताप लागेको छैन ?एक पल्ट ४० बर्षको पाको मानिस मलाई यति मन परो कि उसलाई फकाउने क्रममा उसको कारमै हाम्रो सम्बन्ध भएको थियो । त्यसवेला उसले मलाई के सोच्यो होला भन्ने पीर लागिरह्यो । मलाई लाग्यो, मेरो शररि आवश्यकताभन्दा बढी भोको छ । यो राम्रो कुरा होइन भन्ने लागेको थियो ।त्यो बानी परिवर्तन भएन ? भएन । ऊ मबाट यति प्रभावित भयो कि मेरो लागि सबैथोक छाड्छु भन्न लाग्यो । उसको परिवार बिग्रने डरभएपछि म साइड लागें । किनभने उसका श्रीमती, छोरा–छोरी थिए । मेरो उद्धेश्य ऊसँग सम्बन्ध राख्ने मात्र थियो, परिवार बिगार्ने थिएन ।
कति समयमा तपाई केटा फेर्नु हुन्छ ?यति समय भन्ने छैन । एउटा पुरुषसँग सङ्गत गर्दा अरु पुरुषसँग उठबस् गर्दिन । मलाई मनै लाग्दैन । अर्को पुरुषसँग उठबस गर्दा मेरो ब्वायफ्रेन्डमाथि अन्याय भएजस्तो लाग्छ ।यौन संवन्धमा माया–प्रेमको भूमिका हुनुपर्छ कि पर्दैन ? माया र सेक्स फरक कुरा हुन् । तर, सेक्समा प्रेम भयो भने त्यो सुनौलो हुँदो रहेछ । नेपालीमा उखान छ नि, सुनमा सुगन्ध, प्रेम भएको अवस्थामा सेक्सको त्यही महत्व छ ।
यति लामो यौनजीवनमा कतिपटक सुनमा सुगन्ध महसुस गर्नुभयो ? एक पटक । केही वर्ष पहिले एकजना सञ्चारकर्मीसँग मेरो संगत भएको थियो । आफू सेफ हुन ऊसँग संगत गरेको थिएँ, तर एक वर्ष नबित्दै ऊसँग मेरो प्रेम हुन गयो । म उसको मायामा यतिधेरै पग्लिएछु कि ऊसँग मात्र तीन बर्ष संगत गरें । त्यसवेला मलाई लाग्यो, सेक्सको आनन्द प्रेममा रहेछ । तर के गर्नु उसले मसँग विवाह गर्ने मानेन ।उसले विवाह गर्न नमान्नुको कारण के होला ?म उमेरले सानी भएँ रे । सङ्गत गर्दा चाहिं सानी नहुने, विवाह गर्दा चाहिं सानी हुने ? म त्यसवेलाखुब रोएकी थिएँ ।
त्यसो भए विवाह गरेर लाइफ सेटल गरे भइहाल्यो नि ?प्रेममा उसले धोका दिएपछि प्रेमप्रति मेरो विश्वास रहेन । त्यसपछि मैले पुरुषको भावनामा बग्नुहुन्न, बरु पुरुषलाई युज चाहिं गर्नुपर्छ भन्ने कुरा बुझें । अब मलाई लोग्ने होइन, लोग्नेमानिस चाहिन्छ ।सधैंभरि यस्तो जीवन कसरी चल्छ ?मलाई थाहा छ, मोडलिङको पनि आफ्नो उमेर हुन्छ । यसरी रमाईलो गर्नुको पनि एउटा समय हुन्छ । त्यसैले धर्मपुत्री पाल्दैछु । १ करोडको लगानीमा एउटा बिजनेस सुरु गर्दै छु । आम्दामी भएको पैसाले समाजसेवा गर्छु । जसरी होस् जीवन मोजमा विताउँछु । अहिले मोडलिङमा मेरो चर्चा छ, भोली समाजसेवामा मेरो नाम रहन्छ ।
सन्तानका लागि विवाह किन गर्नु परो र ? मलाई एउटा यस्तो लोग्ने मानिस चाहिएको छ, जो हेण्डसम होस्, असल व्यवहारको होस् । उसलाई म आफ्नो सन्तानको बाबु बनाउन चाहान्छु तर त्यसमा उसको अधिकार हुनेछैन । त्यो मेरो मात्र सन्तान हुनेछ । – हाम्रोसंदेशबाट साभार